CoSchedule: Kalandrie fanontana sy fanontana ara-tsosialy ho an'ny WordPress | Martech Zone
Asabotsy 15 Febroary 2014 Asabotsy 15 Febroary 2014 Douglas Karr
Wow… wow fotsiny. Namaky momba izany aho CoScedule roa volana lasa izay ary farany dia nanam-potoana hisoratra anarana amin'ny fotoam-pitsarana ary hanome azy andrana. Plugin mahafinaritra be dia be miaraka amin'ny fahaiza-manao maro hafa izay noheveriko.
Ny fahaizana mijery ny bilaoginao WordPress miaraka amin'ny kalandrie fanontana lahatsoratra efa natao teo aloha, na dia miaraka amin'ny fahaizany misintona sy mitete aza. CoSchedule dia mitondra ny tetiandron'ny famoahana amin'ny sehatra vaovao hafa. Raha tokony ho fomba fijery tsotra fotsiny ny tetiandro, dia nanao interface iray fotsiny izy ireo tamin'ny famokarana atiny ho an'ny bilaoginao ary koa ny fizarana ara-tsosialy an'io.
Ireto misy fiasa tiako be:
Fampiroboroboana ny fiaraha-monina amin'ny ho avy - misy plugins fampiroboroboana sosialy betsaka, ao anatin'izany ny fahaizan'ny Jetpack hanaparitaka lahatsoratra manerana ny fantsona sosialy. CoSchedule dia mandray amina marika vitsivitsy na eo aza ny fahafahany mamoaka ny fampiroboroboana ny fiaraha-monina amin'ny andro, herinandro na volana ho avy!
Drafitra Pane - mety hieritreritra ianao fa voanjo aho, saingy manana drafitra 30 eo amin'ny bilaogiko izao. Tsy hoe hadinoko ny momba azy ireo, indraindray mifandray amin'ny orinasa soratako aho raha mila fampahalalana fanampiny. Indraindray aho manadino fa manana drafitra be dia be aho… fa ny Kalandrie CoSchedule dia manana sidepane izay miseho miaraka amin'ireo hafatrao rehetra rehefa ampidirinao. Azonao atao ny manintona sy mampidina ny lahatsoratra amin'ny kalandrie rehefa maniry ny hamoaka azy ianao!
Andraikitra ekipa - manomboha lahatsoratra vaovao amin'ny kalandrie ary azonao omena ny iray amin'ireo mpanoratra anao, fomba mahafinaritra hitantanana ny ekipanao ary hahazoana antoka fa mahazo fandefasana mandanjalanja ny lahatsoratra avy amin'ny olona rehetra (na lohahevitra iray avy amin'ny olona manokana) miaraka amin'ny fanantenana ny daty namoahana!
Integrations - Seamless buffer fampidirana ary koa Bitly ho an'ny fanafohezana URL, Google Analytics ho an'ny fanarahan-dia fanentanana, Custom Analytics (raha toa ka mihazakazaka zavatra toa Webtrends na Site Catalyst ianao), ary koa ny fampidirana Google Calendar hijerena ireo kalitao amin'ny kalandrianao manokana!
Tags: bitlybufferfanarahana ny fanentananacoschedulegoogle kalandriefanentanana googlefamoahana sosialyfamoahana sosialy wordpress